Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Qarax lagu Dilay Mas'uuliyiin Katirsan Maamullada Baydhabo iyo Jowhar.
Wednesday March 07, 2018 - 18:49:08 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in weerar qarax lagu dilay Mas'uuliyiin katirsan maamullada Koonfur galbeed iyo HirShabelle.
Sawir hore qarax ka dhacay sh/hoose
Qarax maanta gelinkii dambe ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Wallaweyn iyo Afgooye ayaa ayaa lagu dilay wasiiru dowlihii wasaaradda Ammaanka maamulka 'Koonfur Galbeed' iyo xildhibaan Axmed Cabdi Faarax oo katirsanaa maamulka isku magacaabay 'HirShabelle'.
War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegtay in ay dishay C/qaadir Cabdi Raxmaan oo loo yaqaan C/qaadir Baraf kaasi oo ahaa wasiirka amniga maamulka Shariif Sakiin iyo Xildhibaan Kabaweyne.
Al Shabaab waxay sheegtay in Mas'uuliyiinta labeegsaday ay soo abaabuleen weerar Bishii Janaayo ka dhacay deegaanka Jameeco Jilyaale oo ciidamo Mareykan ah ay ku xasuuqeen Carruur wax ka baraneysay Machad islaami ah.
"Mujaahidiinta ayaa maanta gelinkii dambe qarax ka dilay saraakiil katirsan Murtadiinta oo garoonka Balidoogle kasoo abaabulay weerarkii lagu qaaday deegaanka Jamaaco Jilyaale,alle ayaa ku mahadsan nagu guuleeyay howlgalkan Barakeysan" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in Wasiiru dowlaha ammaanka Koonfur Galbeed iyo xildhibaanka lasocday ay Garoonka Balidoogle kulasoo kulmeen saraakiil Mareykan ah waxayna kasoo qeyb galeen shir shirqool loogu abaabulayay shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Wasiir Baraf wuxuu ahaa xildhibaan katirsan Baarlamaan fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo, dadka ku dhintay qaraxa waxaa kujira ciidamo ilaalo u ahaa waxayna wadarta dhimashadu gaaraysaa 5 qof oo isugu jira Mas'uuliyiin iyo ciidamo ilaala ah.
Ciidamada Al Shabaab oo la wareegay deegaan Kaabiga Ku haya Guriceel.